Nke a bụ otu ị ga - esi nwee ihe ndabara zuru oke - AFRIKHEPRI
Lelee Bessie (2015)
Ụkwụ siri ike na mpịakọta mara mma, ndị inyom niile (na ndị ikom!) Nrọ. Ọ bụrụ na e nwere mkpụrụ ndụ ihe mgbakwasị ụkwụ na ịnwe ma ọ bụ, ọmarịcha mma, anyị niile nwere ike ịchọta ọmarịcha mma na mgbalị, oge ... na ego.
Steatopygia: mkpụrụ ndụ ihe nketa nke "na Afrika".
Ihe omuma ihe anọ na-abanye n'egwuregwu mgbe a na-akpọ aha oku nke callipygous nke ụmụ nwanyị Africa na ụmụ nwanyị.
Ọkpụkpụ ọkpụkpụ: nhazi nke oghere lumbar na sacrum na-etolite ma ọ bụghị usoro ogologo. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ịnweta ọmarịcha mma, ị ga-enwe ọmarịcha ntụpọ.
Ọkpụkpụ ahụ (nnukwu, ọkara na obere gluteus): eriri ahụ ike ga-adịkwu n'etiti ndị Africa, nke ga-eme ka ụda olu dị ukwuu.
Ọdịdị nke anụ ahụ adipose: Ụfọdụ African agbụrụ (Bushman si kwuo, Hottentots Pygmgées, Khoisan, Hadza ...) na-genetically ji a akpọ steatopygia. Nnukwu abụba a dị n'ite na apata ụkwụ bụ ike iji chebe ha ka ha dịrị ndụ n'oge ụnwụ nri. Ụdị a pụkwara ịbụ omenala na agbụrụ ụfọdụ (na Niger) hangandi(ụmụ nwanyị na-enye ike maka nri) maka ebumnuche mmekọrịta mmadụ na ụlọ.
Ọdịdị nke dermsỌchịchịrị anụ nwere denser dermal anụ ahụ karịa Caucasian akpụkpọ. Collagen na elastin fibroblasts dị ọtụtụ. Nke a na - arụpụta ihe dị elu karị, akpụkpọ anụ.
Azịza nke ụlọ ọrụ ịchọ mma.
Na Europe, "ihe ndị pụrụ iche" na-achọ iji belata cellulite (slimming) ma melite àgwà nke akpụkpọ (ike). Enwere ike ime ka mmetụta nke ihe ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị iche iche site na usoro ntuziaka (ịhịa aka n'ahụ) ma ọ bụ usoro (njedebe, electrostimulation).
Na Africa (ma na Brazil ma ọ bụ United States), ọnọdụ dị iche. Anyị achọghị ikpochapụ ya. N'ụzọ dị iche, anyị chọrọ ịhụ ka ha na-aza! Inwe ọtụtụ ihe na-eme ka ụfọdụ na-eleghara anya. Creams Bora Bora, Botcho ude ( "nnukwu ike" na Abidjan òtù) Yodi ọgwụ (South Africa), suppositories okporoko imeju mmanụ metụtara na a nri abubara, brazil osisi (maca) ọgwụ ndị na-egbochi ọgwụgwọ ... Ọtụtụ ngwaahịa ndị nwere ngwongwo na-egbuke egbuke nke a kwesiri ibuli elu.
Ihe ize ndụ dị ize ndụ!
N'Africa, ụfọdụ omume - ndị na - emeghị ka ha dị irè - bụ ndị nkịtị ma dị oke egwu maka ahụ ike.
Mkpụrụ ọgwụ ụfọdụ (ọmụmụ ụdị) zaa ndị ike na-akpali ndị pituitary gland nyak estrogen na-eme ka o kwe gị ahu na-echekwa abụba ke ike na n'úkwù (na / ma ọ bụ n'ebe ọzọ!) Iji mee ka ha na-eto eto. Nsogbu nwere ike ịpụta: cysts na ara, dysregulation nke oge nsọ, ọnọdụ obi ...
Iji ngwa ngwa ibugo onu ha ruo n'ikè, ha ara ma ọ bụ n'úkwù, ụfọdụ na-eje igba doses nke Deca Durabolin, ihe anabolic steroid ngwaahịa na-ewu ewu na bodybuilders na-akwalite mmepe nke gluteal mọzụlụ, jikọtara na mmiri njigide n'ime anụ ahụ. Ma mmetụta dị iche iche dị ọtụtụ: ọbara mgbali elu, isi ọwụwa, ọbara ọgbụgba, ihe otutu ...
Usoro ọzọ na-edozi kpamkpam na enweghị ntọala sayensị ọ bụla: Maggi broth cube nke ụzọ ụzọ siri ike ga-esi pụta maka ebubo ebubo na abụba abụba. Nnu nnu di elu nke ogwu a bu ihe na-adighi adi na mucous membranes ma na ebute nje ndi nsogbu ha nwere ike itinye ndu ndi nwanyi n'ihe ize ndụ.
Egwuregwu: ima mma na ọdịmma.
Nhọrọ kachasị mma ma dị ọnụ ala ka ga-abanye n'egwuregwu ahụ. The buttock nwere atọ akwara: nnukwu, onye na-ajụ na obere gluteus. Ọkpụkpụ ahụ na-aba n'anya bụ otu n'ime akụkụ kasị ukwuu nke ahụ mmadụ. Enwere ike itinye ha niile na ụzọ dị iche iche site na egwuregwu ma nweta olu dị elu. A ọnụego kwa izu sessions nke 5 20 nkeji, nwetụ cardio na ibu ọzụzụ, ị kwesịrị ị na ngwa ngwa hụ gị butt metamorphosis. Nke a bụ ụfọdụ n'ime mmemme kachasị dị irè.
N'ọnọdụ guzoro: n'ihu slits, squats
Nkọwa 4: mgbanwe na mgbatị na azụ, obere nkịta
Igha na azụ: akwa
Ụgha ụgha: agbatị ụkwụ
Ntughari elu na ịkụnye ihe: ịwa ahụ mma nke ikuku.
Dị ka anyị kwuru n'isiokwu anyị ihe ukwu 2016, Africa bu ala nke ndi choro maka njem nleghari ihe ndi ozo. Ọtụtụ ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọdịmma mmadụ na-ekwe ka ikpokọta ọrụ nlegharị anya na nlekọta. Ebe ọ bụ na 2 afọ, ndị kasị ibu na-abawanye na okwu nke ọrụ bụ welitekwuo olu nke ike (+ 86% kwa afọ na USA, + ​​780% na South Africa!). Mmụọ nsọ site kpakpando dị ka Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Beyonce, nicki minaj, ọtụtụ puku ndị inyom na-eji nke a. Ọ bụghị naanị ndị ahịa nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, mana, ụmụ nwanyị ojii nke oke ụlọ dị elu. Ihe dị oké ọnụ na-eme (ọtụtụ puku euro) na, dị ka omume ọ bụla nke ịwa ahụ, nke nwere ike ime ka post-ịkpa nsogbu (mgbu, ọjụjụ, na-agwọ ọrịa ...).
Ntughari nke ihe a na-eme ya na ụzọ abụọ Aspirate (dịka apata ụkwụ n'apata ụkwụ) mgbe ahụ nyeghachite abụba gị na ntụziaka iji dozie olu na ọdịdị. A pụrụ imegharị ọgwụgwọ ugboro ugboro.
Ntinye nke silicone na-etinye na-enye ohere mmụba dị ịrịba ama na olu na ọdịdị nke ihe.
Na-akpụ akpụ lingerie.
Bịa, n'ihi na ndị na-achọ ịghọ aghụghọ ule ntakịrị ... obere ihe mkparụ ọsọ na maka nkwụsị ozugbo n'enweghị nhụjuanya ma n'enweghị mgbalị, ihe nkedo na-arụ ọrụ bụ ngwọta. Anyị na-ahọrọ ịla azụ azụ ma ọ bụ pantyhose na njikọta nwere ike ime nke nwere ike ime ka ọ dị elu. Ụdị nke oge a (faux-cul) nke na-ewu ewu na France na narị afọ nke iri na itoolu.
Isiokwu a na ọtụtụ ndị ọzọ www.panafricanbeauty.com
Ònye bụ Abraham Petrovich Hanibal?